300kw fampiasa matetika ny fametrahana herinaratra mpamokatra herinaratra IGBT
Home / Fiatoana fanasan-drivotra mahazatra / 300KW famatsiana herinaratra fampidinana IGBT miditra matetika
300KW fampiasa matetika ny fametrahana herinaratra fanalefahana IGBT
Sokajy: Fiatoana fanasan-drivotra mahazatra Tags: Ny hafanana indostrialy IGBT, Fanasitranana fanasitranana IGBT, Ny herim-pamoretan'ny IGBT, Ny fametrahana herinaratra fanalefahana IGBT, Indonezin'ny herinaratra fanamorana, induction heating power supply, IGBT, fampiasana matetika ny IGBT
Ny haavon'ny hafanana indostrialy IGBT famokarana herinaratra famokarana herinaratra, IGBT medium frequency induction heating system, IGBT medium frequency induction heating system, solid state medium frequency induction heater supplier.
Fiarovana ambony indrindra: 300KW
Feno hafanana: 1-20KHz, mifanaraka araka ny asan'ny fitaovana.
Famaranana ambony: 480A
Vokatra nivoaka: 30-450A
Output malefaka: 70-550V
Input voltage: 380VAC phases three, 50 or 60Hz
Dingana famaranana: 100%
Fotoam-pivoaran'ny fiatoana: 1-99.9seconds
Fahadiovana rano: ≥0.2Mpa, ≥10L / min
Famaritana: (L x W x H): 560 x 560 x 1750mm
Volana Generateur: 240KG
Fiarovana ny kapila (L x W x H): 1060 x 460 x 670mm
Fiatrehana lanjan'ny capacitor: 150KG
≤500KG volamena, volafotsy, varahina, varahina varahina.
≤200KG amin'ny vy, fioronana tsy misy vy.
≤200KG amin'ny alimina, fametrahana alim-bosotra.
Matoanteny amin'ny teny alemaina Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny alemaina
Ny tsofa vy na vy sy tongotra varahina ho an'ny fanangonana, sns.
Miaraka amin'ny fitaovana elektronika IGBT sy ny teknolojia tsy mifototra amin'izao fotoana izao, ny hafanam-pamokarana dia azo avy amin'ny 1KHZ mankany 20KHZ ary ampiasaina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina oscillation.
Vitsy kely, raha ampitahaina amin'ny milina mpikirakiran'ny SCR, dia mila sehatra 1 / 10 ihany no ilaina, hampihenana ny habakabaka.
Ny fahombiazany sy ny famokarana angovo, ny haavon'ny herinaratra ary ny herin'ny hery ao anatin'ny sehatra feno.
Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso automatique 1-20KHZ, tsy mila fanovana eo amin'ny sehatra.
Ny fifandimbiasam-pamokarana maharitra na ny fomba fanaraha-maso ny herinaratra dia zavatra hafa
Ny fampisehoana feno ny herinaratra, ny vokatra angona, ny fizarana output ary ny ankehitriny.
Fomba tsotra: ny fiantsoana dia azo ianarana amin'ny iray minitra.
Fandefasana tsotra: mampifandray ny milina amin'ny 3phase 380VAC sy ny fantson-drano fotsiny.
Ny timer dia azo atao mba hisorohana sy hanitsiana ny fotoana fampangatsiahana, ny hery manasitrana, ny fotoana maharitra, ny fihazonana ny herinaratra ary ny fanaraha-maso ny mari-panafana sy ny hafanana.
Ny tombony amin'ny teknolojian'ny fanaraha-maso amin'izao fotoana izao:
Ny teknolojian'ny fanaraha-maso amin'izao fotoana izao dia ampiasaina mba hiantohana ny fiasa miasa amin'ny hafanana 1 ka hatramin'ny 20KHZ.
Miaraka amin'ny teknolojia fanaraha-maso amin'izao fotoana izao, dia misy ny firaiketam-pandaminana mitambatra izay mitarika ny toetra mampiavaka ny mpamorona angona midadasika.
Miaraka amin'ny teknolojian'ny fanaraha-maso amin'izao fotoana izao, ny fiasan'ny IGBT miasa dia afaka manatsara bebe kokoa, ny 100% cycle dia mety ho azo tsapaina mora foana hamela ny milina hiasa amin'ny 24hours amin'ny ambaratonga ambony indrindra.
Miaraka amin'ny teknolojian'ny fanaraha-maso amin'izao fotoana izao, ny fahamendrehan'ny IGBT dia afaka mivoatra amin'ny dingana lehibe hampihenana ny fanamboarana amin'ny ankapobeny.
Fanamafisana sy fanalefahana hery miaraka amin'ny mpamokatra induction